आज २०७७ भदौ १४ गते आइतबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस – Rapti Khabar
आज २०७७ भदौ १४ गते आइतबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस
आज २०७७ भदौ १४ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
आज देशभरको मौसम: वर्षाको सम्भावना छ कि छैन ? हेर्नुस
काठमाडौं, असोज ११, आज (आइतबार) पनि काठमाडौं उपत्यकामा बिहानैदेखि घाम देखिएको छ। प्रदेश १ र २ बाहेक देशका सबै स्थानमा अहिले घाम देखिएको मौसमविद्ले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् समीर श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश १ र २ मा न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव अझै रहेकाले मौसम बदली भई घाम नदेखिएको हो। त्यता अहिले हल्का पानी पनि […]
‘ऊ त ‘तल्लो’ जातको पो रैछ’
फेरि भारी वर्षाको सम्भावना, कहाँ के हुन्छ ?